Ebe Iji Chọta Left akpa ọnọdụ Na Germany? | Save A Train
Home > Travel Europe > Ebe Iji Chọta Left akpa ọnọdụ Na Germany?
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 01/04/2021)
Ingga njem bụ njem kachasị mkpa mana ị kwesịrị ime ya na-enweghị akpa, karịsịa maka layovers ma ọ bụ ọ bụrụ na ị dị nnọọ nwere a free ụbọchị na otu nke Germany na-ewu ewu n'obodo. Anyị niile ozi gị mkpa n'ihi ekpe akpa ebe ke Germany maka atọ nke isi obodo, Berlin, Munich, na Hamburg.
Ma ị na-aga Oktoberfest na Munich, na-atụ egwu ọnụ ụzọ ámá Brandenburg na Berlin, ma ọ bụ ịtụgharị uche na nnọkọ oriri na ọ partyụ partyụ nke Reeperbahn na Hamburg, ndị a bụ ndị kacha na kasị adaba ụzọ hụ na akpa gị na-ọma e-elekọta mgbe ị inyocha.
Left akpa ọnọdụ Na Germany: Berlin
na Tegel Airport, ị ga-ahụ n'aka ekpe akpa ebe na-enweghị Ngwọta A na ha na-emeghe ụbọchị ọ bụla si 5 onwem na 10:30 pm. The ahịa ị ga-akwụ ga-iche site € 7.20 ka € 9,90 na-adabere na size nke gị akpa. The ogologo oge maka nchekwa bụ na-akparaghị ókè.
mgbe Schonefeld Airport, ị ga-achọta ekpe akpa ebe na-enweghị Ngwọta D abịa. Ha awa bụ Sunday na Friday, si 7:30 onwem na 11:30 pm na Saturday site 8 onwem na 6 pm. The ahịa mbio € 4 € 6 maka n'aka ibu na € 7 € 10 maka nkịtị enyocha ibu.
Na mma nke n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè n'ihi na ị bụ na ha na-emeghe 24 awa ụbọchị, ụbọchị asaa a izu. The Central Train Station (Hauptbahnhof) na-ebe ị ga-ahụ igbe na ọ dị na ụgbọala park n'èzí isi ụlọ na ebe C.
Dabere na size nke mkpuchi gị mkpa, ha na-eri n'etiti € 4 € 6 a ụbọchị na kacha nchekwa oge 72 awa. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na-eleta a ekpe ibu ọrụ, e nwere otu onye na-emeghe kwa ụbọchị site na 6 onwem na 10 pm na ọ bụ ihe dị ka € 5 kwa ihe.
Ọzọ ụgbọ na mkpuchi nchekwa na-agụnye Alexanderplatz, Ostbahnhof, Potsdamer Platz na Zoologischer Garten. Easy chọta ekpe akpa ebe ke Germany!
Left akpa ọnọdụ Na Germany: Munich
Munich Airport bụ ndị kasị mma nhọrọ mgbe ị na-na ịga na obodo. The Service Center na-enweghị Ngwọta 1 bụ na-emeghe 24 awa na e nwere a abụọ ebe na-enweghị Ngwọta 2 ma oghere awa si 5 Abụ etiti abalị kwa ụbọchị.
Ị ga-akwụ n'etiti € 5 na € 10, dabere na nke nke na akpa gị nakwa dị ka ndị dị n'ime ya. Lelee ọdụ ụgbọelu’ website tupu ị na ọhụrụ ọmụma na ndị ọzọ ọdụ ụgbọelu maka ekpe akpa ebe ke Germany.
Left akpa ọnọdụ Mgbe Munich Train Stations
Ichekwa akpa na ọdụ ụgbọ elu nke Munich ga-abụrụ gị ikuku. E nwere ihe n'ụba nke igbe na e nwere ihe ịrịba ama ka mfe ịchọta ha. A ọkọlọtọ mkpuchi ga-eri gị banyere € 4 kwa ụbọchị na maka ibu, uwe-ikpe sized mkpuchi banyere € 6 kwa ụbọchị. E nwere Otú ọ dị a 72-hour mmachi ịgba.
Ọtụtụ ndị ọzọ na ụgbọ e ruo eruo na otu ụlọ ọrụ.
Left akpa ọnọdụ Na Germany: Hamburg
Your nanị nhọrọ bụ Hamburg ọdụ. The Left akpa ụlọ ọrụ bụ na-enweghị Ngwọta 2, Ọkwa 1 Ọpụpụ na ọ na-emeghe Monday ka Sunday si 4:30 onwem na 11 pm. Ị ga-akwụ n'etiti € 5 na € 25, niile dabere na size. The ibu akpa gị, elu gị ego, na ọdụ ụgbọ elu na-ana € 3 dị ka otu oge nhazi ego kwa ihe.
Nwere ike ịchekwa akpa gị ebe a maka obere oge etiti yana ọ kachasị mma ịlele tupu ị rute. Kpọkọtanụ dị ka ihe ọmụma dị ukwuu dị ka ị pụrụ tupu na-aga.
Dị ka ọtụtụ n'ime ndị n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Europe, na ị nọ na chi na igbe nke na-niile nnọọ mfe na na-emeghe 24 awa ụbọchị. The nkezi na-eri bụ € 5 a ụbọchị na idụhe size mgbochi.
Private Services: The 'Airbnb' N'ihi na akpa
E nwere ihe ole na ole ụlọ ọrụ ndị na-eji a usoro yiri nnọọ na nke Airbnb, naanị maka ibu. Ị na mkpa ịchọ a ebe, ka a ndoputa ma hapụ gị na akpa na a gbaara ebe na bụ ihe kasị adaba n'ihi na ị. Ọ bụ ụzọ kasị mma nke na-achọta ekpe akpa ebe ke Germany.
Insurance a gụnyere ke price na ha ịdị iche iche site na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ. Ị ga-enwe udo nke uche na gị na-akpa ke mma aka.
Nke a bụ nnọọ reputable nchekwa ọrụ na dị mfe iji na na ọnụ nnọọ ezi uche. Ị ga-akwụ a ọnụego ewepụghị nke € 5 kwa bag kwa ụbọchị. Gị akpa na-ịnshọransị ihe karịrị € 800. Ọ na-niile na-esịne ke price.
Ị nanị chọọ ha website maka a ebe dị gị nso. Ị ga-ahụ na-enwe ike ịhọrọ gị kpọmkwem 'StashPoint' na mgbe ị na-adapụsị akpa gị, na-egosi gị kpọrọ gị ndoputa na ị na-ota!
Yiri ọrụ a na-agụnye Nannybag na BagBnb. Ọrụ ndị a bụ n'ezie dị ofụri Europe na pụrụ n'ụzọ dị mfe na-eji maka Germany.
Mgbe-ejegharị ejegharị na-akpakọba ibu dị mkpa, ọ bụ mgbe niile kasị mma na-akwadebe. Ugboro abụọ nyochaa nkọwa niile ma chọta azịza nke dịịrị gị mma na ebe ị na-aga. Ma nke ahụ bụ ọdụ ụgbọelu, n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, ma ọ bụ ịlele ọrụ nzuzo ndị dị n'ịntanetị, ọ bụ ihe niile dị na click nke a button. Obi ụtọ na-akpa ma zọpụta ụfọdụ ego gị gbaa ụgbọ okporo ígwè na ojiji Save A Train!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Ebe Iji Chọta Left akpa ọnọdụ Na Germany?” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fleft-luggage-locations-germany%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)